Iindaba -Ibhokisi ye-adsorption eyenziweyo esebenzayo yokhuseleko lokusingqongileyo
Izixhobo zokutsha ezikhutshiweyo eziveliswe yiHangzhou lvran izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo ikakhulu inezixhobo zoxinzelelo zecarbon adsorption, izixhobo zokutsha kunye nesixhobo solawulo sombane. Izixhobo zokutsha zenziwe ngokuhambelana nemigaqo emibini esisiseko yoxinaniso lwe-adsorption (ukusebenza ngokukuko) kunye nokutsha komlilo (ukonga umbane). Ngokufanelekileyo, indlela yokutsala yokunkcenkceshela i-adsorption.
Isixhobo sokutsha esisebenzayo sisebenzisa iindlela ezininzi zerhasi zokwenza umsebenzi oqhubekayo, iibhokisi ezininzi zecarbon adsorption zokwenza enye into, kunye negumbi elinye lokutsha. Itanki yokuqala esebenzayo ye-adsorption ithengisa inkunkuma. Xa iphantse yazala, yeka ukusebenza kwe-adsorption kwaye kwangoko wenze unyango lokususa i-desorption. Kwangelo xesha, itanki yesibini esebenzayo ye-carbon adsorption isetyenziselwa ukukhangisa kunye nokugxininisa. Xa iphantse yazala, umsebenzi we-adsorption uyamiswa kwaye ususwe ngokukhawuleza. Ngokwalo mzekeliso, iiseti ezininzi zeebhokisi zekhabhoni ezenziweyo ezenziweyo zenza inkqubo efanayo yokukhangisa kunye nokususa iseti njengeseti yokuqala yeebhokisi zebhokisi zekhabhoni. Irhasi yenkunkuma elahliweyo iye yaxinaniswa (uxinaniso luphindaphindwe kaninzi kunalolo lwantlandlolo) kwaye yathunyelwa kwigumbi lokutsha elinokutsha lokutsha. Impendulo ye-oxidation ye-catalytic yenziwa kwi-catalyst kubushushu obuphezulu be-250-350 ℃, oko kukuthi, "ukutsha", ukuze igesi yenkunkuma eguqulweyo ibe yi-CO2 engenabungozi kunye ne-H2O yokukhupha. Xa uxinizelelo lwenkunkuma ye-organic ifikelela ngaphezulu kwe-2000 ppm, igesi yenkunkuma ephilayo inokugcinwa ngokwendalo kwibhedi yokuthintela ngaphandle kokufudumeza kwangaphandle, kwaye uninzi lwegesi yomsila emva kokutsha ikhutshelwe emoyeni.
Umvelisi wezixhobo zokutsha ezincedisayo
Izixhobo zokutsha zohlobo oluthile lwenkunkuma luhlobo lwezixhobo zonyango lwegesi ezisebenzisa inkuthazo yokwenza ioksijini kunye nokubola kwezinto ezinokutsha kwigesi yenkunkuma kubushushu obuphantsi. Izixhobo zokutsha kweCatalytic zilungele unyango lwenkunkuma eqhubekayo kunye nokuhlanjululwa. Ukuba isebenza ngokungxama, ayisiyomfuneko yokusebenzisa amandla kuphela kulungiselelwa ubushushu bokuqala, kodwa nobushushu bokusabela abunakuphindwa busebenze, obuya kubangela inkunkuma enkulu yamandla. Ke ngoko, xa ukhetha izixhobo ezinokutsha, iifektri kufuneka ziqwalasele iimeko zokusebenza kwamashishini ngokubanzi.
Izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo i-Hangzhou lvran iphuhlise ngempumelelo izixhobo zomlilo ezisebenza ngokucoceka okuphezulu, ulondolozo lwamandla kunye nokhuselo lokusingqongileyo ngokufunxa amava obuchwephesha ekhaya nakumazwe aphesheya. Izixhobo eziluhlaza eziluhlaza ziye zaphumelela kuzo zonke iindawo zelizwe, kwaye izixhobo eziluhlaza eziluhlaza ziyafumaneka kuloo ndawo. Oluhlaza luqhube ngophuculo oluqhubekayo lweenkonzo kunye nezakhono zabo, kuphela ukuthembela kwakho kunye nenkxaso.
Ixesha Post: Oct-30-2019
Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Fume Isitshisi, Ifeni yecandelo leCentrifugal, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan, Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Ukukhupha iFan,